Caleema saarka Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir | Awdalnation.com
Madax ka socota dalalka Africa iyo kuwa Carabta ayaa shalay ka qeyb galay caleema saarka Madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee Cumar Xasan Al-Bashiir.
Xaflada caleema saarka iyo dhaarinta oo aheyd mid si aad ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qeyb galay, Madaxweynayaasha, Masar, Chad. Zimbabwe, Soomaaliya, Kenya, Jabuuti iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa loo dhaariyay Madaxweynaha Sudan shanta sano ee soo socoto, kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhowaan dalkaas ka dhacday.
Laakiin Kooxaha mucaaradka ayaa qaadacay doorashada, kuna tilmaamay mid aan cadaalad u dhicin, sidoo kale Al-Bashiir ayaa ku guuleystay 94% doorashadaas.
Dalalka Reer Galbeed ayaan iyana ka qeyb gelin caleema saarka, iyagoo horay u cambaareeyay doorashada Al-Bashiir.
Madaxweyne Al-Bashiir ayaa ahaa Madaxweynihii u horeeyay ee sanadkii 2009 ay dacwad ka soo gudbiso Maxkmada dambiyada dagaalka ee ICC, isagoo lagu eedeeyay inuu mas’uul ka ahaa olole dad badan lagu dilay oo ka dhacay Gobolka Darfur.
Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa talada dalka Sudan la wareegay sanadkii 1989, isagoo xiligaas ku qabsaday afgambi milateri, isagoo ahaa sarkaal ka tirsan Ciidamada Milateriga.